Zim needs $27bn to fund revival - Mike Campbell Foundation
News24 / fin24 Feb 05 2014
Harare - Zimbabwe requires $27bn - more than twice the size of its economy - to fund a five-year plan to improve basic services and rebuild the impoverished country, a senior government official said on Wednesday.
President Robert Mugabe's government wants to invest in food security, social services and infrastructure, to reduce poverty and expand the economy an average of 7.1% a year by 2018.
Zimbabwe forecasts an optimistic growth rate of 6.4% this year from 3.4% in 2013, but analysts say the economy has lost steam, hit by a dollar crunch, company closures and electricity shortages.
"The quantum of the resources needed to fund ZimAsset is estimated at over $27bn, with the bulk of it earmarked for energy, water, sanitation and social sectors," Jonah Mushayi, the acting director for fiscal policy in the Ministry of Finance, told an industry meeting.
Zimbabwe's gross domestic product totalled $11.6bn in 2013, according to government statistics.
Mushayi said the government planned to issue diaspora bonds to tap the nearly 3 million Zimbabweans living abroad but gave no details. Remittances from the Zimbabweans living outside the country amounted to about $1.8bn in 2013.
Zim rounds on "fat cat" state executives
Zim to criminalise negligent bankers
Zim's bleak prospects
Zim economy will grow 4% - World Bank